Wararka - Taxaddarrada warshadaha Gearmotors iyo alaab-qeybiyeyaasha
Range Heerkulka heerkulka ee la isticmaali karo:
Mootooyinka korontada ku shaqeeya waa in loo adeegsadaa heerkul gaaraya -10 ~ 60 ℃. Tirooyinka lagu sheegay qeexitaanka buugga waxay ku saleysan yihiin adeegsiga heerkulka qolka caadiga ah qiyaastii 20 ~ 25 ℃.
Range Heerkulka heer kaydinta:
Matoorrada korontada ku shaqeeya waa in lagu keydiyaa heer-kul ah -15 ~ 65 ℃ .Haddii ay dhacdo in lagu kaydiyo meel ka baxsan noocyadan, dufanka ku yaal aagga madaxa qalabka ayaa awoodi doona inuu si caadi ah u shaqeeyo mashiinkuna awood uma yeelan doono inuu bilowdo.
Range Heerka qoyaan qaraabada:
Matoorrada korontada ku shaqeeya waa in loo adeegsadaa 20 ~ 85% qoyaan u dhigma. Sidaa darteed, fadlan ka taxaddar isticmaalka aagga noocan oo kale ah.
Ku rogidda usheeda dhexe wax soo saar:
Ha ku leexin matoor ku habboon mashiinka wax soo saarkiisa markii, tusaale ahaan, aad diyaarinayso booskiisa si aad u rakibto. Madaxa qalabka wuxuu noqon doonaa farsamo xawaare kordheysa, taas oo yeelan doonta saameyn waxyeelo leh, oo dhaawaceysa qalabka iyo qaybaha kale ee gudaha; mishiinkuna wuxuu isu rogayaa koronto-dhaliye.
Position Meel lagu rakibay:
Mawqifka la rakibay waxaan kugula talineynaa booska jiifka ah ee loo adeegsaday kormeerka maraakiibta shirkadeena Iyadoo jagooyin kale, dufanka ayaa ku daadan kara mootada hareeraha ah, culeyska wuu isbadali karaa, guryaha mootadana way ka beddeli karaan kuwa ku jira jiifka. Fadlan iska jir.
Allation Ku rakibida matoor ku habboon mashiinka wax soo saarka:
Fadlan ka taxaddar marka la tixraacayo dalbashada xabagta.Waxaa lagama maarmaan ah in laga taxaddaraa in xabagta aysan ku faafin usheeda dhexe oo ay ku sii qulquleyso wax dhalista, iwm. gudaha mootada. Intaas waxaa sii dheer, ka fogow xirmooyinka saxaafadda, maxaa yeelay waxay ku dhici kartaa ama dhaawici kartaa farsamada gudaha ee matoorka.
Ling Maaraynta terminalka mootada:
Fadlan ku samee shaqada alxanka waqti yar ..
Codsashada kuleyl ka badan inta lagama maarmaanka u ah terminaalka ayaa dhalaali kara qaybaha mootada ama haddii kale waxyeello u geysta qaab dhismeedka gudaha. Intaa waxaa dheer, ku-daboolida awood xad-dhaaf ah aagga terminalka wuxuu culeys saari karaa gudaha mootada wuuna dhaawici karaa.
Storage Keydinta muddada-dheer:
Ha dhigin matoor ku habboon jawiga ay ku yaalliin waxyaabo abuuri kara gaaska wax dila, gaaska sunta ah, iwm, ama heerkulkiisu aad u sarreeyo ama hooseeyo ama qoyaan badan leeyahay. Fadlan si gaar ah uga taxaddar kaydinta muddada dheer sida 2 sano ama ka badan.
Cimri dhererka matoorrada jihaysan waxaa si weyn u saameeya xaaladaha xamuulka, qaabka hawlgalka, deegaanka isticmaalka, iwm .Sidaas darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo xaaladaha ay alaabtu sida dhabta ah loogu isticmaali doono.
Xaaladaha soo socda ayaa saameyn taban ku yeelan doona cimriga dheer. Fadlan nala tasho.
Load Raadka saamaynta
Starting Bilow joogto ah
Operation Hawlgal joogto ah oo muddo dheer socda
Turning Qasab ku noqosho iyadoo la adeegsanayo wiishka wax soo saarka
● Dib-u-noqosho daqiiqad ah oo u jeesashada jihada
Ku isticmaal xamuul ka sarreeya xaddiga dhererka la qiimeeyay
● Isticmaalka danab aan caadi ahayn marka loo eego danab la qiimeeyay
Wadnaha wadnaha, tusaale ahaan, nasasho gaaban, xoog koronto-dhaliye, PWM Control
● Adeegso marka ay dhaaftay xamuulka xad dhaafka ah ama rarka la riixay.
● Isticmaal meel ka baxsan heerkulka loo qoondeeyey ama qiyaasta qoyaan-qoyan, ama deegaan gaar ah
● Fadlan nagala tasho arrimahan ama wixii kale ee shuruudo adeegsi ah ee ku habboon, si aan u hubinno inaad xulatay qaabka ugu habboon.